कोशी अञ्चल अस्पताल भित्र डाक्टरको लुगा लगाएर दलाली - Saptakoshionline
कोशी अञ्चल अस्पताल भित्र डाक्टरको लुगा लगाएर दलाली
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २१, २०७४ समय: ८:४१:५९
प्रतिक श्रेष्ठ , बिराटनगर बिराटनगरमा रहेको सवैभन्दा पुरानो कोशी अञ्चल अस्पतालका डाक्टर हरुले अस्पताल बाट आफ्नो क्निीकमा बिरामि पठाउने गरेको रहस्य खुलेको छ । उपचारका लागी खोटाङबाट राजन गिरीले आफ्नो भाउजुलाई उपचार गराउनका लागी बिराटनगर स्थीत कोशी अंञ्चल अस्पताल ल्याएका थिए । तर उपचार गराउने क्रममा डाक्टर एम.बी बि एस. एम डि इन्टरनल मेडिसियन रामकुमार शाहले अस्पतालमै हुने जाँच अस्तालमा सम्भव नभएको र आफ्नो किल्नीक गएर उपचार गराउन बिरामिका आफ्न्त र बिरामिलाई भनेका थिए ।
उता हामिले डाक्टर एम.बी बि एस. एम डि इन्टरनल मेडिसियन रामकुमार शाहलाई यस बिषयमा बुझ्न खोज्दा उनी पन्छिएका थिए । डा. रामकुमार शाहले बिराटनगरमा एड्भान्स नामक प्राइभेट क्निीक संञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले कोशी अस्पतालमा आउने अधिकाँश बिरामिलाई आफ्नो क्लिनिकमा गएर उपचार गराउन लगाउने गरेका छन् । यस बिषयमा अस्पताल प्रशासन प्रम्ख मेडिकल सुपरीडेन्टेन्ट रोसन पोख्रेलले आफुलाई जानकारी भएको बताए । डाक्टर रामकुमार शाह जस्ता डाक्टरका कारणले गर्दा डाक्टर हरुको अस्तीत्वमा प्रश्न उब्जीएको बताए । यस बिषयमा स्प्र्रष्टिकरण सोधिने र सस्पेन गर्ने समेत बताएका छन् ।s
उता आफुलाई अस्पतालमै हुने उपचार समेत क्निीकमा गएर गर्न लगाएर आफुलाई डाक्टरले ठगी गर्न खोजेको बिरामिले बताए । उपचार गराउन आएकि बिरामि सरीता कार्किले कोशी अंञ्चल अस्पतालमा चेक जाँच गर्ने र रिपोर्ट हरु लिन समस्या हुने भन्दै आफुलाई एड्भान्स क्निीक गएर उपचार गराउन डाक्टर रामकुमार शाहले फकाएको बताए ।
दैनिक रुपमा उपचार गराउन आउने बिरामिलाई कोशी अंञ्चल अस्पताल परीसर बाट कहिले दलाल हरुले त कहिले अस्पताल भित्र रहेका डाक्टरको लुगा भित्र रहेको दलाल हरुले आफ्नो क्लिनीक सम्म पुयाउने गरेका छन् । अनुगमन गर्नु पर्ने निकाय र संम्बन्धीत प्रशासनको लापरबाहि र अनुगमन नहुँदा बिरामिहरु ठग हरुको फन्दामा पर्दै आएका छन् । यस तर्फ संम्बन्धीत निकायको ध्यान आकर्षण हुन आवश्यक छ ।